लुम्बिनी विकास बैंकको बोनस पारित - Aathikbazarnews.com लुम्बिनी विकास बैंकको बोनस पारित -
लुम्बिनी विकास बैंकले आफ्नो शेयधनीहरुले दिने बोनस पारित गरेको छ । सञ्चाकल समितिले प्रस्ताव गरेको १७.०७ प्रतिशत बोनस शेयर मंगलबार बसेको ११ औं वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको हो । उक्त बोनस शेयर वितरण पश्चात बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
कम्पनीले मङ्गलबार ११ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को मुनाफाबाट उक्त बोनस शेयरको प्रस्ताव पारित गरको हो । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी २ अर्ब २० करोड ९७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । १७ दशमलव ०७ प्रतिशत बोनस पछि कम्पनीको चुक्तापूँजी २ अर्ब ५८ करोड ६९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ कायम हुनेछ । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले कायम गर्नुपर्ने चुक्तापूँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पु¥याउन कम्पनीले बोनसको सहारा लिएको हो ।
गत आर्थिक वर्षको चौंथो त्रैमाससम्म कम्पनीले ५८ करोड ९७ लाख १ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । मङ्गलबारनै कम्पनीले गत वर्षको चौंथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
यस लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले “निरन्तर सहयात्रा” भन्ने नाराका साथ देशभरका ६५ शाखाहरु र १३ वटा एटिएमबाट आफ्ना करिब २ लाख ४० हजार ग्राहक महानुभावहरुलाई उच्च स्तरीय आधुनिक एवं नविनतम प्रविधिसहितको बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले २०७६ असार मसान्तसम्ममा २४ अर्ब ८० करोड निक्षेप संकलन गरी २२ अर्ब ७६ करोड कर्जा प्रवाह गर्नुका साथै आ.व. २०७५÷०७६ को आषाढ मसान्तसम्ममाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार वोनस र कर अघि ९३ करोड ६० लाख मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ ।
गर्भनरको डा. नेपालको नाममा लुटको खेती कहिलेसम्म ?
नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरे पदभार ग्रहण, विश्व बैंकसँग ऋण स्वीकार्ने निर्णय
निषेधाज्ञा जारी रहँदा पनि २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार